ကျွန်တော် ရဲ့ အတွေး လေးပါ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော် ရဲ့ အတွေး လေးပါ…….
ကျွန်တော် ရဲ့ အတွေး လေးပါ…….
Posted by nyiminsatt on Mar 23, 2012 in Creative Writing, Short Story |9comments
အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာပါ……. ပထမဦးစွာ ကျွန်တော်ပြောခြင် တာ က ဒီ post ဟာ ကျွန်တော် ရဲ့ ပထမ ဦးဆုံးဖြစ်ပြီး မရေးတတ် ၊ ရေးတတ် ဖြင့် စရတာ ဖြစ်လို့ အားလုံးသော စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ၊ နောင်တော့် နောင်တော်များ အားလုံး အမှား အယွင်း များပါရှိ ခဲ့ ရင် ခွင့်လွှတ် သည်းခံ ဖတ် ပေး ပါ ရန်။
ကျွန်တော် တို့ရဲ့ အမိ မြန်မာ ပြည်ကြီး ကို ကျွန်တော် အပါ အ၀င် မြန်မာ နိုင်ငံ သား အား လုံ ချစ်မြတ်နိုး ကြမှာပါ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဘယ်လို ပဲ တိုင်း ပြည် ပြင် ပကို ရောက် ရှိ နေ ကြပေ့ မယ့် ကိုယ့် အမိမြန်မာပြည် ရဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့ ယဉ်ကျေး မှူလေး တွေ ကို ရောက် ရှိရာ အရပ် မှာ မ ပျက် မကွက် လေး ပုံဖေါာ ဆင်နွှဲ ကြ တာ ဟာဖြင့် ချစ်စ ရာ ဓလေ့ ဖြစ်သလို ၊ ကိုယ့် အမိမြန်မာ မြေ ကို ချစ်မြတ် နိုးတယ် ဆိုတဲ့ ပြယုတ် လေး တစ် ခု လဲ ဖြစ်တယ် ဆို တာလဲ ဘယ်သူမှ မငြင်း နိူင်ပါဘူး။
ခုဆို ရင် မြန်မာ့ ရိုးရာ သင်္ကြန် နဲ့ အတူ မြန်မာ နှစ်သစ် နီး ကပ် လို့ လာ ခဲ့ ပါ ပြီ။ ၊
ဒါကြောင့် … ဒီ မြန်မာ နှစ်သစ် မှ နောင်နှစ် ပေါင်းများ စွာ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အမိ မြန်မာ ပြည်ကြီး ငြိမ်း ချမ်း သာ ယာ ၀ပြောရအောင် ၊ လူမျိုး စွဲ ၊ ပါတီစွဲ၊ ပုဂိုလ်စွဲ တွေ ကို စွန့် လွှတ် ပြီး တော့ … အမိမြန်မာ မြေ အတွက် ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ကြပါ စို့ လား ဗျာ။
nyimin satt has written2post in this Website..
View all posts by nyiminsatt →
ဒီနှစ်လဲ (缅甸泼水节) မှာတရုတ်တွေလဲနေမယ်မထင်ပါ..
ညီမင်းဆက်ရေ ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ် …. အမိမြန်မာပြည်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ သဲတပွင့်ဖြစ်ပါစေလို့
အကိုတော့အောင်မြင်တယ်နော် မထမဆုံးပို့လေးပေမယ့် အားပေးတဲ့သူများပါတယ် ညီမတောင်တခုမှမတင်ရသေးပါဘူး နောက်လည်းထပ်ရေးပါအုံးနော်
အကိုတော့အောင်မြင်တယ်နော် မထမဆုံးပို့လေးပေမယ့် အားပေးတဲ့သူများပါတယ် ညီမတောင်တခုမှမတင်ရသေးပါဘူး နောက်လည်းထပ်ရေးပါအုံးနော် အကိုလောက်တောင်မရေးတက်လို့ခုထိပို့တခုမှမတင်ရသေးပါဘူး အကို
အကိုတော့အောင်မြင်တယ်နော် မထမဆုံးပို့လေးပေမယ့် အားပေးတဲ့သူများပါတယ် ညီမတောင်တခုမှမတင်ရသေးပါဘူး နောက်လည်းထပ်ရေးပါအုံးနော် အကိုလောက်တောင်မရေးတက်လို့ခုထိပို့တခုမှမတင်ရသေးပါဘူး
ဝဲလကမ်းပါဝဲလကမ်းပါ………. တိုင်းကျိုးပြည်ပြု စာစုများကို